LEGO minifigures Black Friday သဘောတူညီချက်များ ၂၀၂၁ Brick Fanatics
LEGO minifigures Black Friday သဘောတူညီချက် ၂၀၂၁
သင်ဟာဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေရင် Lego minifigures ဤ Black ကသောကြာနေ့ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့မြင်လိုသော သက်ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များအားလုံးကို စုစည်းဖော်ပြပါသည်။
Some minifigure sets have been discounted on the American Lego ဆိုက်။
LEGO minifigures Black Friday သဘောတူညီချက်များ
အားလုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး Lego စုဆောင်းသူသည် အစုံလိုက်ဝယ်သည် - အချို့သည် ၎င်းတို့ကို ပြည့်နေသော ပလတ်စတစ် သေးငယ်သော လူများနောက်တွင် ရှိသည်။ အဲဒီအဆင့်တွေထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထည့်တွက်ရင်၊ Black ကသောကြာနေ့ သင့်အား မြှင့်တင်ရန် အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေး ဖြစ်နိုင်သည်။ Lego လျှော့စျေးအစုံမှတဆင့် minifigure စုဆောင်းခြင်း၊ မကြာခဏသင်ရောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ အခြားအုတ်များအတွက်ပိုကောင်းသောအသုံး ၀ င်ကိုရှာဖွေလျှင်ပင် minifigures များကို ၀ ယ်ယူရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ စုဆောင်းထားသောအသေးစားသို့မဟုတ်တတိယစာမျက်နှာမှarty လက်လီအရောင်းဆိုင်များ။
Lego Star Wars minifigures Black Friday သဘောတူညီချက်များ
အဆိုပါ Lego အဖွဲ့ကအဆောင်မှာထုတ်ပြီးခုခံနေတုန်းဘဲ Lego Star Wars စုဆောင်းထားသောအသေးစား စာချုပ်ပါကိစ္စများကြောင့်ထင်ရှားသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်အသစ်စက်စက်ကိုလိုချင်ပါကယေဘူယျအားဖြင့်သင်အစုံသို့လှည့်ရန်လိုသည် Lego Star Wars အသေးစားရုပ်ပုံများ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ချိုသာသောစျေးနှုန်းအချက်များဖြင့် ကွဲအက်နေသော သေးငယ်သောရုပ်ပုံအချို့ ရှိခဲ့သည်။ Black ကသောကြာနေ့ ထို sets များ၏စျေးနှုန်းများပိုမိုကျဆင်းလာသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည် - သင်၏ bulking အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာကိုပေးဆောင်သည်။ Lego Star Wars minifigure စုဆောင်းခြင်း။
ဥပမာအနေနဲ့၊ ငါတို့အသစ်ထွက်တဲ့ The Mandalorian (သို့) The Clone Wars အစုံထဲကကြိုက်တဲ့အပေးအယူတွေကိုငါတို့တွေ့ချင်ပါတယ်။ Mandalore အပေါ် 75310 Duel - အလွန်အေးမြသော Maul နှင့် Ahsoka minifigures နှစ်ခု (သို့) သင်၏လက်ကိုရယူရန်နည်းလမ်းကောင်းကိုပေးသည် 75315 Imperial အလင်း Cruiserလောလောဆယ်တွင် Moff Gideon, Fennec Shand နှင့် Dark Trooper တို့ကိုအိတ်ထဲထည့်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
LEGO စိတ်ကြိုက် minifigures Black Friday သဘောတူညီချက်များ
ဒါဟာထုံးစံပါ Lego minifigures မင်းနောက်မှာတတိယ p တွေအများကြီးရှိတယ်arty ထုတ်လုပ်သူများအပါအ ၀ င်သင်၏စုဆောင်းမှု၌မည်သည့်ကွက်လပ်ကိုမဆိုဖြည့်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည် နိုင်ငံသားအုတ်, Eclipse Grafx, Minifigs.me, Fab Bricks များ, Clone ကြည်းတပ်အကောက်ခွန်, အုတ်ကြံခြင်း နှင့် ပို. ဒါတွေအားလုံး ကြီးကြီးမားမားရှိလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ Black ကသောကြာနေ့ စိတ်ကြိုက်အပေးအယူများ တန်းစီထားသည်။ Lego minifiguresဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ကိုယ်ပိုင်အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အခြားအရာများ
LEGO Harry Potter minifigures Black Friday သဘောတူညီချက်များ
၂၀၂၁ ခုနှစ်သည်ကြယ်စင်လဖြစ်ခဲ့သည် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ အသစ်မပါသော minifigures များ စုဆောင်းထားသောအသေးစား series ဆွဲရန်။ နှစ် (၂၀) ​​ပြည့်နှစ်ပတ်လည်အပိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားရွှေကိုးခုကိုယူဆောင်လာသည် Lego ဟယ်ရီပေါ်တာ minifigures များအပါအ ၀ င် ဟယ်ရီပေါ်တာRon Weasley, Hermione Granger, Professor Dumbledore, Professor McGonagall, Professor Snape, Professor Quirrell, Lord Voldemort and Rubeus Hagrid ။
အဲဒါတွေအားလုံးကို ဒီနွေရာသီရဲ့အတွဲတွေမှာ ရနိုင်တာမို့ အဲဒါတွေအားလုံးကို စုစည်းဖို့အတွက် အပြည့်အစုံကို ဒီမှာ ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ Black ကသောကြာနေ့ သက်ဆိုင်ရာအစုံများကို လျှော့စျေးဖြင့်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ယခုနှစ်လက်ဆောင်များဝယ်ယူမှုတွင် အရည်အချင်းပြည့်မီစေရန်အတွက် အဆိုပါတူညီသောအစုံများကို ပေါင်းထည့်ခြင်းဖြင့် သင်ပျောက်ဆုံးနေသောသူများကို ဖမ်းယူရန် အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်နိုင်သည်။
LEGO Series 21 minifigures Black Friday သဘောတူညီချက်များ
ယခုနှစ်၏တစ်ခုတည်းသောလိုင်စင်မဲ့စီးရီးဖြစ်သည် စုဆောင်းထားသောအသေးစား, အသက် 71029 စီးရီး 21, မှာရရှိနိုင်ပါသေးသည် LEGO.com နှင့် Lego ယူကေနှင့်ဥရောပရှိစတိုးဆိုင်များတွင်မျက်မမြင်အိတ်တစ်အိတ်လျှင် ၃.၄၉ ဒေါ်လာ / ၃.၉၉ ဒေါ်လာ
နှစ် ဦး စလုံး၏ပစ်လွှတ်မှုနှင့်အတူ 71030 Looney တီးလုံး နှင့် 71031 Marvel စတူဒီယို လများကတည်းက၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သည် Lego အဖွဲ့သည်၎င်း၏ကျန်ရှိသောထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကိုပြောင်းရန်ကြိုးစားလိမ့်မည် အသက် 71029 စီးရီး 21 နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်မှာ – အဲဒါက သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရက်ရက်ရောရော လျှော့စျေးကို မြင်နိုင်မယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ Black ကသောကြာနေ့. (တကယ်တော့ တချို့က Lego စတိုးဆိုင်များသည်၎င်းတို့အားအကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်သုံးပုံတစ်ပုံမှတ်သားထားပြီးဖြစ်သည်။ )
Lego Marvel minifigures Black Friday သဘောတူညီချက်များ
Lego Marvelနောက်ဆုံးရင်းနှီးသောပတ်ဝန်းကျင်မှလူစွမ်းကောင်းများသည်နောက်ဆုံးတွင်ပူးပေါင်းခဲ့သည် စုဆောင်းထားသောအသေးစား ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အကြောင်းအရာ၊ 71031 Marvel စတူဒီယို ပထမလေးလုံးကိုပုံဆွဲပါ Marvel Cinematic Universe ရှိုးပွဲများရောက်ရှိလာမည် Disney+: WandaVision၊ Falcon နှင့်ဆောင်းရာသီစစ်သား၊ Loki နှင့်ဘာဖြစ်လျှင် ...
၎င်းတို့သည် စင်ပေါ်၌သာ ရောက်ရှိလာသည့်အတွက်ကြောင့် အဆိုပါ စာလုံး ၁၂ လုံးအတွက် လေးနက်သော လျှော့စျေးကို မြင်နိုင်မည်မဟုတ်ဟု ခံစားရကြောင်း၊ Black ကသောကြာနေ့ဒါပေမယ့် မင်းဘယ်တော့မှမသိဘူး။ မဟုတ်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် သင့်အား လိုအပ်သည့် လက်ဆောင်များနှင့်အတူ ဝယ်ယူမှုတိုင်းအတွက် လိုအပ်သည့် အသုံးစရိတ်များထက် ပြီးပြည့်စုံသော ခြင်းတောင်းဖြည့်ပစ္စည်းများကို ဖန်တီးပေးမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် သင့်အား ကြီးထွားလာချိန်တွင် လက်ဆောင်များနှင့်အတူ ဝယ်ယူမှုတိုင်းအတွက် လိုအပ်သော အသုံးစရိတ်သတ်မှတ်ချက်များထက် ကျော်လွန်သွားမည်ဖြစ်သည်။ Lego Marvel minifigure စုဆောင်းခြင်း။
p အဖြစ်လက်ရှိရနိုင်သောဇာတ်ကောင်များအားလုံးကိုမမေ့ပါနှင့်art of Lego Marvelပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအစုစု၊ 76178 နေ့စဉ် Bugle ဥပမာအားဖြင့် ပထမဆုံး Daredevil၊ Blade နှင့် Punisher အသေးစားရုပ်ပုံများ အပါအဝင် ၎င်းတို့အနက်မှ ကြီးကြီးမားမား ၂၅ ခုပါရှိသည်။ VIP အမှတ်နှစ်ဆဖြင့် သတ်မှတ်ထားသော (သို့မဟုတ် လက်ဆောင်-ဝယ်ယူမှုတစ်ခုအတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီရန်) ကို ဖမ်းဆုပ်ခြင်း။ Black ကသောကြာနေ့ အကောင်းဆုံးအချို့ကို သင့်လက်ထဲရောက်ရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Lego Marvel ယနေ့အထိ minifigures
Lego Batman minifigures Black Friday သဘောတူညီချက်များ
အဆိုပါ Lego Batman အပြင်အဆင်သည်ထင်သလောက်မတိုးတက်ပါ Marvel လောလောဆယ်တွင်၊ သို့သော် အရေအတွက်ထက် အရည်အသွေးကို အာရုံစိုက်ခြင်းက 2021 ခုနှစ်တွင် ရှာဖွေရန် နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသော အသေးစားရုပ်ပုံများစွာကို ပေးစွမ်းသည်။ Black ကသောကြာနေ့ အကောင်းဆုံးတွေထဲက တစ်ခုကို အိတ်ထဲထည့်ဖို့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အခွင့်အရေး ဖြစ်နိုင်တယ်။ Batman အနားယူချိန်၌ဥပမာ minifigures များ ၇၆၁၃၉ ၁၉၈၉ Batmobile - ၎င်းသည်စင်ပေါ်မှမထွက်သွားမီအလွန်လျှော့စျေးကိုခံစားနိုင်သည့်အလားအလာရှိသည်။
76240 Batmobile Tumbler အချိန်မီ လွှင့်တင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Black ကသောကြာနေ့နှင့် အသစ် နှစ်ခု ပါဝင်သည် (အလွန်ကောင်းသည်) Batman Christopher Nolan's The Dark Knight မှ Joker minifigures များ ထို့အပြင်၎င်းသည်မည်သည့်အလားအလာရှိသောလက်ဆောင်များနှင့်မဆို ၀ ယ်ယူရန်လွယ်ကူစွာရသင့်သောစျေးနှုန်းတစ်ခုပါ ၀ င်သည်။
£ 209.99 / $ 229.99 / € 229.99 သည်သင်လက်လှမ်းမမီလျှင်အနည်းငယ်ပိုသေးပြီးစီမံခန့်ခွဲနိုင်သောအရာလည်းရှိသည်။ ၇၆၂၃၉ Batmobile Tumbler: Scarecrow Showdown၎င်းတွင်ပိုမိုတောက်ပသော minifigures နှစ်ခုပါဝင်သည် Batman Dark Knight trilogy မှ Scarecrow နောက်ဆုံးမှာ ၄၀၄၅၃ Batman Harley Quinn နှင့် Penguin တို့ကိုယှဉ်။ ကြီးမြတ်သုံးမျိုးကိုကောက်ရန်အမြန်နှင့်စျေးသက်သက်သာသာဖြင့်ပေးသည် Lego Batman minifigures များနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်နှစ်ကုန်တွင်အငြိမ်းစားယူရမည်ဖြစ်သည်။
LEGO minifigure display case Black Friday အပေးအယူများ
ကောင်းပြီ၊ ဒါဆိုရင်မင်းက minifigures တွေရဲ့ရာချီ၊ ဒါမှမဟုတ်ထောင်ဂဏန်းလောက်ကိုမင်းစုဆောင်းပြီးပြီ၊ ဒါပေမယ့်အခုကဘာလဲ။ အံဆွဲ (သို့) သေတ္တာထဲတွင်၎င်းတို့အားလုံးကိုထည့်ထားခြင်းသည်ပျော်စရာမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်၏အကောင်းဆုံးသောကစားနည်းသည်သူတို့၏အသေးစိတ်ဒီဇိုင်းများကိုရှုထောင့်စုံမှပြသနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
တတိယပစ္စယောarty ကဲ့သို့သောထုတ်လုပ်သူများ iDisplayit နံရံတွင်တပ်ဆင်ထားသော display များနှင့် desktop display case များအပါအဝင်၊ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ရွေးချယ်စရာများစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ၎င်းတို့သည် သင့်အသေးစားရုပ်ပုံများကို ဖုန်မှုန့်နှင့် လက်လွှဲခြင်းမှကာကွယ်ခြင်း၏ နောက်ထပ်အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးစွမ်းမည်ဖြစ်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်နှစ်ပတ်လည် minifigure ဂိမ်းတွင်ပါ ၀ င်သည် Lego Ninjago၎င်းသည်၎င်း၏နင်ဂျာ၏ရွှေရောင်ဗားရှင်းများကိုယခုနှစ်များစွာတွင်ဖြန့်ခဲ့သည် Ninjago အမွေအနှစ်အစုံ။ ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် မြင်နေရတုန်း Black ကသောကြာနေ့ ကြိုက်နှစ်သက်မှုများအပေါ် လျှော့စျေးများ Element တွေကို၏ 71735 ပြိုင်ပွဲ နှင့် ၇၁၇၃၈ Zane ၏ Titan Mech Battle၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောသဘောတူညီချက်အချို့ကိုအမှန်တကယ်စောင့်နေခဲ့သည် ၇၀၆၀၇ NINJAGO City ဥယျာဉ် - အရာသည်သာအကြီးဆုံးမဟုတ် Ninjago ရက်စွဲသတ်မှတ်ရန်သာမကရွှေဝူပါ ၀ င်ရန်တစ် ဦး တည်းသာဖြစ်သည်။
ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ လူအပေါင်းတို့သည်ထွက်စစ်ဆေးရန် Black ကသောကြာနေ့ 2021 ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသောအပေးအယူများသည်၊ သိုလှောင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအားလုံးအတွက် ဤစာမျက်နှာကိုစောင့်ကြည့်ပါ Lego minifigures ယခုနှစ်အကြီးမားဆုံးစျေး ၀ ယ်ပွဲတစ်လျှောက်